Biko họrọ ụlọ ahịa weebụ nke dabara adaba n'ọnọdụ gị. - GBL Europe BV
Mbupu & akara na Chọpụta
HomeBiko họrọ ụlọ ahịa weebụ nke dabara adaba n'ọnọdụ gị.
Biko họrọ: ọ bụrụ na ịchọrọ ịtụ y-butyrolactone naanị anyị nwere ike iresị ngwaahịa ndị a na azụmaahịa ndị edenye aha. N'okwu a, biko họta ụlọ ahịa maka ndị ahịa azụmaahịa. Maka ndị ahịa chọrọ ịzụta Multi Gel Remover® a na-eresị trough a store pụrụ iche. Ngwaahịa ae mepụtara ọhụrụ adịghị ọcha y-butyrolactone (GBL) ma anyị nwere ike ree nke a na-enweghị mgbochi ọ bụla na ụwa niile.
Azụmaahịa niile: Biko debanye aha na ngalaba nnabata anyị ga - eduzi gị na - agbanye usoro ịme aka. Uru nke ịbụ onye ahịa ahịa edebanyere aha bụ ọnụahịa ka mma, ịnweta ọnụ ọgụgụ buru ibu yana ohere iji usoro 0% VAT kwuo.
Ndị Azụmaahịa edenyere aha - Allwa Niile
®lọ ahịa Multi Gel Remover® - ụwa niile
Nkwado M: + 31 (0) 85 888 3500
Nkwado II: + 32 (0) 266 908 66
Nkwado Ndị Ahịa na Email
Idenye aha anyi n’akwụkwọ akụkọ iji nweta akụkọ na mmelite kachasị ọhụrụ.
BỤBỤTA Ugbu a!
Copyright © 2019 GBL Europe BV. Ikike niile echekwabara.